Myanmar IT Resource Forum » FREE TALKING ZONE » » Free Talking » တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်...
1 တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 9:02 am
ဒီလိုဆိုက်မျိုးကို တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... ကျနော်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာကို အဲဒိဆိုက်မှာသွားကြည့်ကြည့်ပါ...
Last edited by solakoko on 29th March 2010, 8:31 pm; edited2times in total (Reason for editing : TEMPORARY PLACE မှ ဤ သို့ ပြောင်း)
2 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 3:20 pm
၀င်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုက်တစ်ခုပါပဲ။ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုစော်ကားထားတဲ့ ဆိုက်ပါ။
ပက်ပက်စက်စက်ကိုစော်ကားတာပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင် ထသတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်ကို စိတ်တိုမိတယ်။
နမူနာတင်ပေးပါ့မယ်။ ဘာသာရေးဆိုက်မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီမှာဘာမှမငြင်းခုံကြစေချင်ပါဘူး။ အဲဒီမှာ cbox ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝင်ဆဲခဲ့တယ်။
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး တွေးကြည့်ပါအုံး တွေးမနေနဲ့ ငေးမနေနဲ့ ရတုန်း ယူထားလိုက် ဟာား ဟား အရှိန်တက်သွားတယ် ပြောရင် သီချင်းဆိုတဲ့ ဆီရောက်ကုန်ပါတယ်. ဒီစာသားလေးအတိုင်းအမြန်ဆုံး ယူထားလိုက်ပါ.. ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ကျွန်တော်ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်အား ဟိုဘာသာမကောင်းဘူး ဒီဘာသာမကောင်းဘူး ကျွန်တော်ကို လာပြောရင် ကျွန်တော်စဥ်းစားမည့် မဟုတ်ပါ. ကျွန်တော်က messenger ပါ ကျွန်တော်ဒီမဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျတ်ဆီးဖို့ သက်သက်ပါဘဲ... ကျန်တာ ခင်ဗျာတို့ ဘုရားမဲ့ ၀ါဒသမားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ရှင်းပါတယ်နော်. ထက်ထက်ရှင်းမပြပါရစေနဲ့ စကားတွေ့အများကြီး ပြောရင် ကိုယ်တော်ချော မောတယ်ကွယ်...
အောက်ကတော့ ပီတာကျော်ရဲ့ C box ထဲမှာ aung aung ဆိုတဲံသူငယ်ချင်းတယောက်က အောက်ကအတိုင်း ဒီလို့ဆိုတယ်ဗျာ.. ပထမသူစကားအရ ကျွန်တော်သဘောမပေါက်သေးဘူး နောက်မှ သူဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်တော့တယ်.
aung aung [You must be registered and logged in to see this link.]: ရှိုင်တွာန်ချောရေ ''မင်းတို့ဂေါတာမကျမ်းမှာလဲ ရန်သူကို သတ်ဖြတ်ပစ်တာဘဲ" တဲ့လား မြောက်များလွန်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကျမ်းတစ်ဆူဆူမှာ လူမပြောနှင့် သက်ရှိ(တိရိစ္ဆာန်)တကောင်ကာင်ကိုပင်4Jan 10, 07:20 PM
aung aung [You must be registered and logged in to see this link.] : သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာတွေ့ရင် ပြောပါ ညွှန်ပြပါ ယခုချက်ချင်း ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ပါမယ် မပြနိုင်လို့ကတော့ မင်းဟာရှိုင်တွာန် (သို့) ရှိုင်တွာန် ကကြားဖြတ်ဝင်တွယ်ပြီး မွေးလာတဲ့သားဖြစ်ရမယ်
သူပြောချင်းတာက ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းမှာ သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာ ပါလားတဲ့ဗျာ. ဤနေရာမှာ ဖြေရမှာက အကြောင်းနှစ်မျိုး ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး လူအများသိတဲ့ လက်ညိုးလိုက်ဖြတ်တဲ့ အင်္ဂုလိမာလ အကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်. အင်္ဂုလိမာလ ဆိုတာ မိတ်ဆွေတာကြားဖူးမှာပါ.. အယ်ဇာတ်ကြောင်းကိုလဲ ကြည့်ပါအုံး ရက်စက်တဲ့ဗျာ ဆရာရဲ့ ကျေးဇူးကို ဆပ်ချင်းလို့ လူပေါင်း ကိုးရာ ကိုးဆယ် ကိုးယောက်ကို သတ်ပြီး လက်ညိုးတွေ့ လိုက်ဖြတ်တယ်တဲ့ (တောင်းတဲ့ ဆရာကလဲ ဘာအကြံနဲ့တောင်းလဲ မသိပါ. ကြက်ခြေထောက်အရိုးလို့ အချဉ်ရည်နဲ့ တို့စားဖို့နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ) သတ်တဲ့ငနာကလည်း မငြင်းဘူး မိစ္ဆာတွေဆိုတော့လဲ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးသိတတ်နေကြတာပေါ့နော်.. ဆရာကလိုချင်တဲ့ဆိုတာနဲ့ လူအသတ်တောင် သတ်ကြတာကို ဗုဒ္ဓ၀င်(သိုင်းဝတ္တူ)စာအုပ်က သင်ကြားထားကို မိတ်ဆွေများ တွေ့ရမှာပါ. အာမယ်လေး ကြောက်ဖို့တော့ ကောင်းလိုက်တာ သူများအသတ်ကို သတ်တဲ့ ငနာ ဘာဖြစ်လဲ မိတ်ဆွေတို့ သိချင်မှာပေါ့ ပါဏာတိပါတကံ မကျရောက်ရပဲ အကုသိုလ်တွေက အဟောသိကံ ( အချည်းနည်း) ဖြစ်၍ ကျွတ်တမ်းဝင်သွားတယ်တဲ့ဗျာ.. အိုး ရက်စက်လိုက်တာ.. ဂေါတာမရဲ့ အာကုသိုလ်တ၇ားကို ခံယူလိုက်တာနဲ့ ကျွတ်တမ်းက ၀င်သွားတယ်တဲ့ဗျာ ဟားဟား တတ်လဲ တတ်နိူ်င်ပါပေ. ဂေါတာမဆိုတဲ့ ကောင်က ဘာကောင်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူး ရှေ့မှာ ကျွန်တော်ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်. ဒီအခါမှာ အနန္တတခိုးရှင် ထာဝရဘုရား က သူအား ယုံကြည့်သောသူတို့အား အပြစ်လွှတ်ပေးသည်ဟု ပြောသည်ကို နည်းနည်းလေးမှ မထူးဆန်းပါနဲ့ဗျာ. မအံသြပါနဲ့တော့ ဘုရားက အရာခမ်သိမ်းကို ဖန်ှဆင်းတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားပါ. ရောဂါဖြစ်လို့ သူများတွဲချီနေ၇တဲ့ ရောဂါသည်လဲ မဟုတ်ပါ. ယနေ့အသက်ရှင်နေထိုင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပေါင်း ကိုးရာ ကိုးဆယ် ကိုး ယောက်ကို သတ်တဲ့ လူ ရှိတောင်မရှိဘူးဗျာ. ရက်စက်ပါပေ ဒါကို ရှက်ရာကောင်းမှန်းမသိ သွန်သင်သင့်လော့ မသွန်သင့်လော့ မစဉ်းစား သူတောင်းစားကျောင်းကနေ လော်စပီကာ နဲ့အော်အော်နေတော့ မိတ်ဆွေတို့ကြားဖူးမှာပေါ့ ဒီလို့သင်ကြားခြင်းဖြင့် မင်းတို့ကြိုက်သလောက်လူသတ် ကြိုက်သလောက် အပြစ်လုပ် ဘယ်သူမှ မကြည့်နဲ့ အင်္ဂုလိမာလ ကိုဘဲကြည့် ဘယ်လို့ အကျွတ်တမ်းဝင်သွားလဲဆိုတာကို အယ်ဒီလို့မျိုး သင်ကြားကြတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်. အယ်လို့ သင်ကြားရုံမကဘူး အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင် အင်္ဂုလိမာလသုတ် ကိုပါရွတ်ဆိုဖို့ အားပေးအားမြှောက် သင်ကြားထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဗုဒ္ဓဘာသာက လူသတ်ဖို့ မအားပေးဘူးလို့ ဆိုလို့ ပါ ဆိုပြနေရတာပါဗျာ. (ကိုယ်တော်ချောက အဆိုတော်မဟုတ်ဘူးနော် တွေ့ရင်ဆိုခိုင်းနေမှာစိုးလို့ ဒီလို့ပြောလို့ ငနာဂတုံးဘုန်းကြီးတွေ့ကို သွားသတိရမိတယ်. ငနာဘုန်းကြီးများ သင်္ကန်းခြုံပြီး အချစ်ရေးကိုယ်ကြောင့် ဆိုတဲ့သီချင်းကိုအာဗြဲပြီး အော်ဆိုနေတာကို စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ တကယ်ကို သဘောကျမိပါသေးတယ်ဗျာ)
3 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 3:53 pm
ကျနော်လည်း ၀င်အော်ခဲ့တယ် မဖြစ်သင့်ပါဘူး
4 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 4:07 pm
5 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 4:44 pm
ကိုယ် လုပ်စရာရှိတာသာ ဆက်လုပ်ကြပါ။ ဂရုစိုက်စရာကို မလိုပါဘူး။ ဆဲလည်းဆဲမနေပါနဲ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူဆို မဆဲသင့်ပါဘူး။ အခုလို ကျနော်တို့ဘာသာကို စော်ကားတဲ့အတွက် သူ့စရိတ်နဲ့သူ သွားပါလိမ့်မယ်။
သူပြောတာတွေထဲမှာ မမှန်တာတွေများပေမယ့် (အခုခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြောင်းပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ မှန်တာတွေ အများကြီးပါ။)
သူပြောတာတွေထဲက မလိုတာတွေ ပယ်ပြီး။ ကိုယ့်ဘက်က မှားနေတာရှိရင်ပြင်ကြရမှာပေါ့။
ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကော မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာလား ၊ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်သက်ဝင်သူတစ်ယောက်လား ဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါဦး။ (ကျနော်ကတော့ ခုချိန်ထိ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်။ အဲဒီ့အဆင့်ကနေ ကျော်အောင်တော့ သူရေးထားတဲ့စာတွေ ဖတ်ပြီးကတည်းက ကြိုးစားနေတယ်)
အစ်ကိုတို့ ၊ အစ်မတို့ကော ??? ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါ။
ကိုယ့်အမျိုး ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ၊ သာသနာ ကို စော်ကားတာ မကြိုက်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာဂုဏ်ရောင် ထွန်းပြောင်အောင် ကြိုးစားကြပါတော့လား။
ဒီလိုရေးတာ ရန်ဖြစ် ၊ ငြင်းခုန်ချင်လို့ ရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျနော်လည်း အဲဒီ့ ဘလော့ကို စစတွေ့ချင်းတုန်းက တော်တော် ဒေါသထွက်မိပါတယ်။
ပိုစ့် ၃ ခုလောက်လဲ ဖတ်ပြီးရော ၊ သူရေးတာတွေမှာလည်း အမှန်တရားတွေပါနေပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကို စော်ကားတာကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေကို ပြောထားတာတော့ အမှန်တွေမို့လို့ ၊ ပြောလည်းပြောချင်စရာဘဲ ဆိုတာ တွေးမိလို့ ခုလိုရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
6 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 4:58 pm
mars wrote: ဒီလိုဆိုက်မျိုးကို တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... ကျနော်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာကို အဲဒိဆိုက်မှာသွားကြည့်ကြည့်ပါ...
ရေးတဲ့ သူက အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ ကုလားလူမျိုးတစ်ယောက်တဲ့... သူကမကျေနပ်လို့တဲ့ ... မကျေနပ်တာက သူတို့ အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ အောက်မှာကျနော်ပြတဲ့ site ကိုပါ... အဲဒါကြောင့်သူက တင်ရေးတယ်လို့ သိရပါတယ်... သိပ်မကြာခင် ဖျက်သိမ်းပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်...
7 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 18th January 2010, 8:35 pm
တော်လောက်ပြီနော် ဒီပိုစ် တော်ကြာများလာတော့မယ် မင်မင်တို့ရေ
8 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်... on 19th January 2010, 6:14 pm
အွန့်။ နာ့ကို Warning ဆိုပါလား။
(ငါကွ။ ပိတ်ထားတာ ၀င်ရေးတာ။ )
9 Re: တစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်...